Ngoku, ukufaka iWindowsPress - Geofumed
Ngoku, ukufaka i-Wordpress
Ngoku, ukufaka WordPress
Matshi, 2010 Internet kunye neBlogs
Kwithuba langaphambili, sibone Indlela yokukhuphela nokulayisha iWindowsPress yethu yokuhlala. Ngoku makhe sibone indlela yokuyifaka.
1. Yakha i database
Ngenxa yoko, kwiCpanel, sikhetha i-MySQL yolwazi. Apha, sibonisa igama leenkcukacha, kule ngxaki ndiya kusebenzisa ukutshaya kwaye ndicinezela iqhosha lokudala. Bona indlela umyalezo oboniswa ngayo othi isiseko sedatha sidalwe geo_fuma, kungenxa yokuba yongeza kumsebenzisi weCpanel igama lenkcazelo entsha edalwe.
2. Yakha umsebenzisi
Ngoku, ndakhetha isiseko esenziwe, kwaye ndibonisa ukuba ndifuna ukudala umsebenzisi omtsha. Ndiya kumbiza blog kunye nephasiwedi, xa ucinezela ukudala ukhetho, jonga indlela umsebenzisi ogqitywe ngayo geo_blog kunye nephasiwedi ebonisiweyo, siya kuthatha ukuba kuthiwa i-tinmarin. Ndiyasikisela ukuba bayichaze ngelixa senza le nkqubo, kuba kamva bayakulibala.
3. Nika amalungelo kumsebenzisi
Ngoku, ndibonisa ukuba lo mse benzisi ndiya kubabela amalungelo. Ndikhetha i-database geo_fuma, umsebenzisi geo_blog kwaye ndiwabela onke amalungelo ukufaka nokufikelela kwi-WordPress.
4. Qamba kwakhona i fayile yoqwalaselo.
Ngedatha esiyilayisheyo, kwi-directory public_html kukho ifayile ebizwa ngokuba Wp-config-sample.php, sihlela igama, silibiza WP-config.php
4. Hlela ukucwangciswa
Ngoku sihlela le fayile, kummandla olandelayo:
// ** Izicwangciso ze-MySQL - Unokufumana olu lwazi kwihostethi yakho yewebhu ** //
/ ** Igama leziko leWindowsPress * /
ichaze ('DB_NAME', 'indawo yomgca');
/ ** Igama lomsebenzisi we-MySQL * /
ichaze ('DB_USER', 'igama lomsebenzisi');
/ ** Iphasiwedi yedatha ye-MySQL * /
ichaze ('DB_PASSWORD', 'yakho');
Yabona, akuninzi, kodwa apha maxesha amaninzi ndididekile. Iibhalo ezinesibindi zizo kufuneka ziguqulwe:
Idatha iyabizwa geo_Fuma
umsebenzisi ubizwa geo_blog
iphasiwedi, kweli phepha i-tinmarin (Kakade, ezi nkcukacha zicinga)
Emva koko kufuneka urekhode ifayile. Ukuba siyihlela ngaphakathi, kufuneka ilayishwe kwisiphakeli esikude.
Njengoko nje ndiqhuba i-domain Geofumadas.com, kufuneka ndibone iphaneli ethi yonke into ilungile, faka igama lebhulogi kunye ne-imeyile ukuze ufake.
Emva koko, umsebenzisi kunye nephasiwedi yesikhashana ifunyenwe apho ingafumaneka khona.
Ukuba umyalezo uphuma ukuba i-database ayikwazi ukufikelela, idatha kwisinyathelo 4 mhlawumbi sibi.
Xa ungaphakathi ngaphakathi kufuneka uguqule iphasiwedi enegama elilodwa elikhethiweyo. Akumelwe sikhohlwe ukuba ukusuka kwifolda ye-wp-admin kufuneka sisuse ifayile yefayile, upgrade.php, kunye ne-install-helper.php.
Post edlulileyo«Edlulileyo Faka i-WordPress, phambi kwemizuzu ye-5
Post Next Iholide enkulu kwiifoto ze-10 +Okulandelayo "